Daawo Sawirada: weerarkii lagu qaaday Hotelka Jazeera – STAR FM SOMALIA
Ugu yaraan 14 qof oo rayid u badnaa, ayaa ku geeriyooday weerarkii ismiidaaminta ahaa ee galabta lagu ekeeyay Hotel Jazeera Ee Magaalada Muqdisho. Waxaana masuuliyadda weerarkaasi sheegatay Al Shabaab.
Khaliif Daahir Maxamed oo ka tirsan Shaqaalaha Gaadiidka Gurmadka Deg-degga Magaalada Muqdisho Ee Amiin, ayaa waxa uu sheegay inay 13 meydad ah ka qaadeen Hotel Jazeera iyo dhaawacyada 21 kale.
Dad dhaawac ahaan loo geeyay Isbitaalka Madiina, ayaa waxaa la soo sheegayaa in qaarkood ay ugu geeriyoodeen, ka dib markii ay si xun ugu dhaawacmeen weerarka ay Shabaabku ku ekeeyen Dhismaha Hotel Jazeera.
Maxamed C/kariin oo Telefishinka Universal uga soo warami jiray Gobolka Gedo, ayaa ka mid ahaa dadkii maanta ku dhintay weerarka ismiidaaminta, ee lagu qaaday Hotel Jazeera oo ku dhow Garoonka Duulimaadyada Aadan Cadde.
Waxaa kaloo weerarkaasi dadkii ku dhaawacmay ka mid ah Madaxii Wararka Telefishinka Universal Ee Magaalada Muqdisho, Salmaan Jamaal Saciid, oo xilligii weerarku dhacaayay ku sugnaa Hotelkaasi.
Diblomaasi ka tirsanaa Safaaradda Shiinaha Ee Magaalada Muqdisho, ayaa ka mid ahaa 14-kii ruux ee ku dhimatay weerarkaasi. Waxaa kaloo soo baxaaya warar sheegaaya in diblomaasi kale uu weerarku ku dhaawacmay.
Illaa iyo hadda lama sheegin Masuul ama Sarkaal ciidan oo ka tirsan Dowladda Federalka Somaliya oo weerarkaasi ku dhintay amaba ku dhaawacmay. Dadka dhintay waxay u badnaayen rayid iyo Shaqaalihii Jazeera Hotel.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa wuxuu si kulul uu u cambaareeyay weerarkaasi, wuxuuna ku sheegay mid argagaxiso iyo wuxuushnimo lahaa. Madaxweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay in laga adkaan doono